मकैको चामल
दैनिक जनजीवन अधिकतम घुम्ती गोठ परम्पपरामै बितिजान्छ। अनेक विशिष्ट संस्कृति, संस्कार, इतिहास, सामाजिक परम्परा, लोकनृत्य, लोकमान्यता, पहिचान यहाँको प्रायः निरन्तर कायम छ। बहत्तरको महाभूकम्पले चकनाचुर, माथि हेर्दा ठाडो भीर, तल पनि भीर, दायाँ हेर्दा पनि भीर नै, बायाँ जाँदा पनि उही ठाडै भीर। क्या खालको गाउँ कि दुई पाइला गलत टेकियो त गइहाल्यो, छैन सास!
जन्म यहीँ भएको मेरो, तर जन्मकथा सुनाउने आतुरमा म छैन। चारतिर हेर्दा पाखाभीरमा केही गाउँ देखिने, यिनै दुईचार गाउँ नै संसार हो लाग्थ्यो, तर खासमा त हैन। म यहाँनेर कथाले संसार एकछिन कैद गरेर गाउँ पुग्छु, सहरबाट केही सम्झना, सम्झना पनि कथै हुँदै जाने त हो मात्र लेख्छु।
केही दिनमा स्कुलमा जाने इच्छा आफैंले आमाको कानमा फुकिदिन्छु।
आमाले बुनेको रातो पहेँलो धर्सो भएको ऊनी–झोला बिहानै भिर्छु। झोलाभित्र एउटा कापी र एउटा पेन्सिल पनि खुर्पाले तिखारेर राखिदिनुहुन्छ आमाले। किताबको नाममा दाइको एउटा किताब खुसुक्क हालिसक्छु।
कैले पनि स्कुल जाने छिमेकी साथीहरुको बोलावट मनै नपरेको, यस दिन भने मलाई छिट्टै डाक्न आए हुन्थ्यो लाग्छ। कोही बोलाउँदै आउँदैन, नआएपछि आमाले नै स्कुलसम्म पु¥याइदिनुहुन्छ।
पैलो दिनको स्कुल कक्षा एकछिन त मलाई भयानक जंगल जस्तो महसुस हुन्छ। सबै चिनेकै साथीहरु हुन्, तर स्कुलभित्र देख्दा अर्कै जस्तो अपरिचित लाग्ने रैछ।
-आज केको भात नि ?
-आज पनि ?
-आमा, आज पनि उस्यीकाङ (चामलभात) ?
-हो। पाक्यो होला हेर त!
-साँच्चै हो ?
-तिहुन चैँ आमा ?
-माच्छेम पे किते नुङ्ग्रा (मस्याङसित गाईको हड्डी पकाएको)।
मैले जुत्ता पहिरेको, जुन लाप्राकमा गोराले बाँड्न आउँदाखेरि पाएको। खुट्टा सुन्निएर मुङ्ग्रो जस्तो भैदिन्छ। बाले भकारी र मैले चैँ डोको बोकेका हुन्छौँ। बाटो त रबर तन्किएजस्तो तन्किएको लाग्छ।
त्यस यात्रा क्रममा बा र म झ्याल्ला आएर बास बसेको रात रोचक छ।
-यो साउले खाना सोध्दा पुग्यो भने ‘आगायो’ भन् हे!
-नपुगेको चैँ कसरी भन्ने?
-‘चायो’ भन् न!
-हाम्रो तल (तराईमा) को घर चैँ कस्तो छ बा ?
-उः त्यो (छेउको भैँसी बाँधिएको खरको टहरोतिर इसारेर) जस्तै–जस्तै छ।
यही गाउँको दुःखमा मेरो पनि केही दुःख थपिँदै जान्छ।
यही गाउँको सुखमा मेरो पनि केही सुख गाँसिँदै जान्छ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, फाल्गुण १४, २०७३ १८:०४:२५